Ye' Aung Lin (CircleRank: 51485, CircleRank in Myanmar: 14) ─ CircleCount.com (Myanmar) Female
Ye' Aung Lin ငါတို့ မှာ....... အဖြူမရှိဘူး... အမဲမရှိဘူး... အားလုံးတန်းတူရည်တူ....Occupation: studentBirthday: 04/15His ProfilesRankThis is the rank of 'Ye' Aung Lin' out of all Google+ Profiles.: 43,151 (GenderRankFor the gender 'Men'.: 27,159)His ProfilesRankThis is the rank of 'Ye' Aung Lin' out of all Google+ Profiles. in Myanmar: 14 (GenderRankFor the gender 'Men'.: 9)His CircleRankThis is the rank of 'Ye' Aung Lin' out of all indexed profiles and pages at CircleCount.com.: 51,485His CircleRankThis is the rank of 'Ye' Aung Lin' out of all indexed profiles and pages at CircleCount.com. in Myanmar: 14Followers: 2,113Following: 1,875Added to CircleCount.com: 08/09/2011That's the date, where Ye' Aung Lin has been indexed by CircleCount.com.This hasn't to be the date where the daily check has been started. (Update nowYou can update your stats by clicking on this link!This can takeafew seconds.)
﻿Latest postings2012-12-10 02:42:49 (11 comments,0reshares,2+1s)10.12.2012
2011-12-17 06:08:08 (18 comments, 1 reshares,3+1s)ကျွန်တော် လုပ်ထားတဲ့ဘလော့လေးကိုhttp://grou.ps/freeman မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ် ...။
2011-12-17 05:48:36 (37 comments, 1 reshares, 1 +1s)ငါ့ဘ၀အတွက် နင်က နံပါတ်. တစ် နှစ် ပြီးတော့ သုံးပါ ပဲ ဘာလို့များ ခုချိန်ကျမှ နင်က ချစ်ပြီးတော့..မုန်းတာလဲ... ရင့်သီးသောအပြုံးများကြားမှာ....ငါလည်းတော်တော်တုံးပါတယ်.. သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုကို နားလည်လိုက်ပါတယ်...အချစ်ကြီးတော့ရှုံးတာပဲ...
2011-12-17 05:45:24 (24 comments,0reshares,3+1s)♫ သံယောဇဉ် ♫ တစ်ရစ်ပြီး တစ်ရစ် ထပ် ရစ်ပတ်ကာ နှောင်ဖွဲ.တဲ့ ` ကြိုး´ ကာလရှည် အနေဝေးလို. ဆွေးး ပျက်မှာ ဆိုးး .... ..
2011-12-17 05:28:38 (12 comments, 1 reshares,3+1s)မြင်းမိုရ်ဦးကို ဖူးမြော်ခြင်း (For Mom) ပွင့်သစ်စ ပန်း ဆန်းသစ်စ လ.....တက်သစ်စ နေခြည်ဆေးမပီသေးတဲ့ ဘ၀.....အမေက အလှခြယ် လူ့ နယ်ထဲမွေးဖွားပြီးသား....ဖြစ်ခဲ့ ။ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်း....ပြုံးခြင်း မဲ့ခြင်းပျော်ခြင်း မော်ခြင်း.....ခံစားမှုကင်းစင်သားတွင် အချစ်တို့ ပုံစု..ထုထည်ကြီးမားပေ့အမေ့ နှလုံးသား....။ဘုရားကိုလည်းမေ့..တရားကိုလည်းမေ့..လူမှုရေးလည်းမေ့..နိုင်ငံရေးလည်းမေ့..စီးပွါးရေးလည်းမေ့သား..ဟေ့..သား.....သားကလွဲရင် အမေ့ရင်ထဲမှာဗလာ....။အမေ့မှာ ပညာမတတ်....(သားကျမှ) မဟောသဓ ဖြစ်စေချင်..အမေ့မှာ ဥစ္စာမပြည့်...(သားကျမှ) ဇောတိကတန်းဝင်စေချင်..အမေ့မှာ အာဏာမရှိ...(သားကျမှ) အနုဂုဒ္ဓဘုရင် ဖြစ်စေချင်..။အမေ..မ၀တ်ဖူးတဲ့ အ၀တ်...သား..၀တ်ဆင်ဖူးခဲ့ဖူးရဲ ့။အမေ..မစားဖူးတဲ့ အစာများ...သား..စားသုံးခဲ့ဖူးရဲ့ ။အမေ..အကျွမ်းတ၀င် မဖြစ်...အီလက်ထရွန်းနစ်ခေတ်စည်းစိ... more »
2011-12-17 05:14:58 (4 comments,0reshares,3+1s)ဘလိပ်ဓါးမှန်းမသိတဲ. lips ကို ice-creamလိုဖက်တွယ်နေတော.ိdrug တခုလိုစွဲလမ်းနေပြီ. ဟေ့..baby.. ကောင်းကင်ကကြယ်လေးတွေလို.. ခူးဆွတ်ဖို.ခက်.. စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ပါတယ်... ငါ.ရဲ.အချစ်ကို နုရွအောင်လုပ် ပြီးရင်ဆီပူပူထဲပစ်ချတတ်တဲ. နင်.ရဲ.မာယာတွေကို ပက်ပက်စက်လေးစားပါရဲ. Monster ဖြစ်ဖြစ် Devil ဖြစ်ဖြစ် Angel လြို့ပုံးတတ်တဲ. အသဲမရှိ ချစ်သူလေးကို ခွင်လွတ်ခြင်း အတိဖြင်. အရမ်းချစ်ပါသည် I am Just cRaZy aBoUT yOu!... more »
2011-12-17 05:00:09 (16 comments,0reshares, 1 +1s)အညာမိသွားတဲ့ငါဗလာပဲ ရှိသလားလို့ မမေးနဲ့ အနာအဆာမရှိခဲ့တာငါ့ဟာငါသိတယ်မညီမျှ မှုကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်အတင်းတွေတော့လာမတုတ်နဲ့ မင်းအပြင် ငါ မရှုပ်ခဲ့ ပါဘူးကွယ်
2011-12-17 04:59:08 (2 comments,0reshares,3+1s)Hello ! Good Morning ...Friends.... Haveanice Day...! I wishhhhh!!!!!
2011-12-15 16:49:46 (23 comments,0reshares,4+1s)ချစ်တာက ချစ်တာပဲအနှစ်ပါချင်မှာပါလိမ့်မယ်မပစ်ခွာရင်ပြီးရော
2011-12-15 16:37:40 (9 comments,0reshares,5+1s)မင်းဟာ . . . ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ အိမ်မက် ............... မျှော်လင့်ချက် ............... အချစ်ဦး တစ်ယောက်တည်းရူးသွပ်စွာ သီကုံးရင်း မင်းကို . . . အမှောင်ထဲက ပြုံးပြနေမိတယ်။
2011-12-12 10:13:21 (7 comments,0reshares,2+1s)အနမ်းတွေကိုလဲ မလိုချင်ဘူး။အလွမ်းတွေနဲ့ လဲ မငိုချင်ဘူးအချစ်တွေလဲမသိချင်ဘူးအမုန်းတွေလဲမရှိချင်ဘူး။
2011-12-12 10:09:50 (1 comments,0reshares, 1 +1s)အနမ်းတွေကိုလဲ မလိုချင်ဘူး။အလွမ်းတွေနဲ့ လဲ မငိုချင်ဘူးအချစ်တွေလဲမသိချင်ဘူးအမုန်းတွေလဲမရှိချင်ဘူး။
2011-12-12 10:04:40 (1 comments,0reshares,0+1s)http://www.ytagi.com
2011-12-12 09:56:24 (4 comments,0reshares,2+1s)အချစ်ဆိုတာ . . . ကြီးတယ် သေးတယ် ဖြူတယ် မည်းတယ် ကောင်းတယ် ဆိုးတယ် ပြဌာန်းချက်မရှိ . . . ချစ်လို ချစ်မိတယ်။
2011-12-09 04:54:57 (3 comments, 1 reshares,5+1s)ငါ စိတ်နည်းနည်းပုပ်တယ်တစ်နှစ် ၃၆၅ရက်မှာ နင့်ကိုသုံးရာသီပဲ ငါလွမ်းတယ်နွေရယ်.. မိုးရယ်.. ဆောင်းရယ်ငါ ကပ်စီးနည်းနည်း နည်းတယ်တစ်နှစ်မှာ သုံးရက်ပဲ နင့်ကိုငါချစ်တယ်မနေ့ကရယ်... ဒီကနေ့ရယ်... မနက်ဖြန်ရယ်တကယ်လို့ ငါ့အနှစ်သက်ဆုံးက ဘာလဲလို့ နင်မေးလာခဲ့ရင်နင့်မျက်လုံးကိုအနှစ်သက်ဆုံးလို့ ငါဖြေမယ်နင့်မျက်လုံးထဲမှာ ပြုံးပျော်တဲ့ငါ့အရိပ်အမြဲရှိလို့ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ နင့်ဆီက ဘာလက်ဆောင်ကို လိုချင်သလဲလို့ နင်မေးလာခဲ့ရင်နင့်အင်္ကျီပေါ်က ဒုတိယကြယ်သီးလေးကို ငါလိုချင်တယ်အဲဒီကြယ်သီးက နင့်နှလုံးသားနဲ့ အနီးဆုံးနေရာမှာရှိလို့ဖြစ်တယ်via- Nine Nine Sanay @ နိုင်းနိုင်းစနေ... more »
2011-12-09 04:53:43 (0 comments,0reshares,3+1s)
2011-12-24 07:50:14 (1 comments, 1 reshares,2+1s)
2011-12-09 04:39:49 (1 comments, 1 reshares, 1 +1s)December 9, 2011
2011-12-09 04:39:00 (6 comments,0reshares,0+1s)December 9, 2011
2011-12-09 04:05:24 (3 comments, 1 reshares,4+1s)သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူရှိနေချိန်ဟာ အိပ်မက်တစ်ခုဆိုရင်ငါဘယ်တော့မှ နိုးထဖို့မကြိုးစားတော့ဘူးသူငယ်ချင်း..........မင်းအားငယ်နေလား..........အားတင်းထားပါ..ဆုံးရှုံးမှုဆိုတဲ့နတ်ဆိုးကိုမင်းမျိုးဖြုတ်ပစ်နိုင်ပါတယ် ။++++++++++++++++++++++++++++++++++++++သူငယ်ချင်း..........အရမ်းဝမ်းနည်းနေလား......မင်းမျက်ရည်တွေသုတ်ပစ်လိုက်သူတို့ကမင်းရဲ့စိတ်ဓါတ်ကိုပျော့ညံ့ညံ့ ဖြစ်စေတယ်။++++++++++++++++++++++++++++++++++++++သူငယ်ချင်း..........စိတ်ပျက်နေပြီလား.......... ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် အမှန်အတိုင်းကြည့်မင်းမြင်ရတဲ့ အရာကိုလှေကားထစ်လို နင်းတက်စမ်းပါ။++++++++++++++++++++++++++++++++++++++သူငယ်ချင်း..........ရင်ဖွင့်ချင်လား........မျိုသိပ်မထားပါနဲ့အဲဒါကိုအစကနေ စပြောငါတို့..နားထောင်နေတယ်။++++++++++++++++++++++++++++++++++++++သူငယ်ချင်း..........အသည်း ကွဲ နေလား.....ဒါဆို...မင်းကံကောင်းပြီအဲဒီ့တ... more »
2011-12-09 03:39:11 (0 comments,0reshares,0+1s)http://nonaingtun.blogspot.com/2011/10/blog-post_22.html
2011-12-08 14:27:36 (0 comments,0reshares,0+1s)http://www.filesonic.com/file/1811015974/p201006.pdf
2011-12-08 13:52:37 (0 comments,0reshares, 1 +1s)http://www.filecrop.com/playboy-magazine-2011.pdf-free-download.html
2011-12-08 13:52:12 (0 comments,0reshares, 1 +1s)http://www.filecrop.com/playboy-magazine-2011.pdf-free-download.html
2011-08-22 13:31:15 (0 comments,0reshares,3+1s)●̮̮̃̾•̃̾) (¯`*•.¸,¤°´'`°¤,¸.•*´¯)__♥♥♥________♥♥♥__ _♥_____♥____♥____♥ ___♥_______♥_______♥ ___♥____ချစ်တယ်___♥__ ____♥_________♥__ ______♥_____♥____ _________♥________ ¸,¤°´'`°•.¸O¸.•°´'`°¤,¸ ♥ I LOVE YOU ♥ ´'`°¤¸¸.•'´O`'•.¸¸¤°´'` (_¸.•*´'`°¤¸'¸¤°´'`*•.¸_)♥♥♥ᘕ ★Peace...★ 。 • ˚ ˚ ˛ ˚: ̾●̮̮̃̾•̃̾) (¯`*•.¸,¤°´'`°¤,¸.•
2011-08-22 13:04:45 (9 comments,0reshares,2+1s)မတွေတာကြာလို့စောင့်လိုက်ရတာအကြာကြီးပဲ ဒါပေမဲ့.....သူလေးကတော့မငဲ့ညှာဘူး၊ပြောချင်ရင်ပြောတယ်မပြောချင်ရင်မပြောဘူး စိတ်တိုတတ်တဲ့ကောင်မလေးရယ်. မင်းလုပ်နေတာကတဘက်လူကိုသက်ညှာမှုမရှိဘူးနော် မင်းနဲ့စကားပြောချင်နေတယ်. မင်းပုံကိုလည်းကြည့်ချင်နေတယ်. ကံကြမ္မာရယ်.. `` ပန်းချီကားလေးတချပ်ဖန်တီးပေးပါ  ပြီးတော့..အနီရောင်ပန်းလေးတစ်ပွင့် သယ်ယူလာပေးပါ။ လူတွေနေတဲ့..အရောင်မရှိတဲ့ကောင်းကင်မှာ ငါ့ကိုတစ်ယောက်တည်းမထားပါနဲ့.. ငါနေတဲ့ကမ္ဘာမှာ တိမ်တွေထူနေတယ် ရီဝေေ၀ မနက်အရုဏ်မှာသူ့အရိပ်သာမြင်နေပါရစေ´´ သတိရနေတယ်........ more »
2011-08-22 12:04:07 (4 comments,0reshares,0+1s)
2011-08-22 11:48:51 (6 comments,5reshares,6+1s)
2011-08-22 11:19:20 (4 comments,0reshares,0+1s)မေတ္တာလှိုင်းထန် ရင်မှာမိုးသေး အချစ်ကန္တာရ အသဲရွက်ကြွေ ဝေဒနာဒီရေကမ်းလွန်မြင့်မောက် ဗေဒါလွင့်မျော ဂျီပရိုလတာကျောက်ဆောင် ဧ၀ရတ်တောင်အလားမြင့်မောက်စိတ်မာန် သူ့နုတ်ဟန်က တော်လှန်ရက်စက် ဓါးထက်ထက်နှင့်သဲထက်စိတ်ဖြာ စိတ်ဒဏ်ရာပေး ရင်မှာဆိပ်တက် အနေခက်အောင် ထိုးနှက်နုတ်လှံမိုးပြိုသံလား ငါခံစားလဲ ဆီးတားမနိုင် စိတ်ညွတ်ယိုင်တော့ အပြိင်သူနဲ့(စကားစစ်ထိုး) မဆိုရက်။ ။ နိုင်ယူပါကွယ် မင်းပြောလွယ်လည်း ခင်တွယ်နှစ်သက်ချစ်ဇောတက်၍ မမုန်းရက်တာ ဒီရင်မှာတော့ မင်းတစ်ယောက်သာ ထာဝရရှေ့ဆက်ချစ်နေမှာ။... more »
2011-08-22 11:17:17 (6 comments,0reshares,0+1s)ချစ်တယ်ဆိုတာကို ညီမသိလားအချစ်ကို ခံစားဖူးရဲ့လားတစ်ယောက်ယောက်ကို ချစ်နေတာကို အချစ်လို့ခေါ်တယ် ညီမရ
2011-08-18 17:15:11 (3 comments,0reshares,4+1s)အချိန်ရှိရင် ဂိမ်းကိုသေချာဆော့ပီး ဖဲချမယ်တော့ မရှိဘူး.အားရှိ စာတွေ ခိုးခိုးကျက် မိဘ စကားနားထောင် သိလား..မင်းတစ်နေ့ခွေးဖြစ်မယ်...ဟီးဟီး xP
2011-08-18 17:13:58 (2 comments,0reshares, 8 +1s)ငါ့ဆက်ဆံရေး ပြောင်းလဲသွားတာမဟုတ်ရပါ................ပြောင်းလဲသင့်လို့ပါ.............ငါ့ဘ၀မှာ..............ငါပိုင်တာ ..................ငါ့စိတ်ထားလေးပဲ.............အဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကိုဇြုစင်အောင်ထားမယ်..................မခင်တွယ်တဲ့လူကို...............တွယ်ကပ်နေရလောက်အောင်................ငါ့စိတ်ဓါတ်တွေအောက်တန်းမကျခဲ့ပါဘူး
2011-08-18 17:00:25 (4 comments,0reshares,4+1s)ဘာတွေပဲလုပ်လုပ်....ဘာတွေပဲကိုင်ကိုင်ကုန်ကုန်ပြောမယ်ဟာ..နောက်ဆုံး လောကကြီးကသေခြင်းမှာ အဆုံးသတ်လိမ့်မယ်....
2011-08-18 12:23:59 (2 comments,0reshares,4+1s)မင်းရေးချင်တာေ၇းဖို့ ..........ခဲတံတစ်ချောင်းတော့............ငါဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး.............ဒါပေမယ်.မင်းရဲ့အမှားတွေ............ကိုဖျတ်ပေးဖို့..............ခဲဖျက်လေးတစ်ခုတော့...........ငါဖြစ်လာမှာပါ...............
2011-08-16 16:58:00 (1 comments,0reshares, 1 +1s)လျှင်မြန်စွာပေးသောသူသည်...နှစ်ဆပေးသောသူမည်၏။။
2011-08-16 16:54:51 (1 comments,0reshares,2+1s)သူကြွေအောင် ခြွေချရင်း ...ကိုယ်တိုင် တဖြုတ်ဖြုတ်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ကောင်သိမ်းပိုက်ဖို့ကြုိးစားရင်း သိမ်းသွင်းခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ကောင် အနိုင်ယူဖို့ကြိုးစားရင်း ဒူထောက်ခဲ့ရတဲ့ကောင်မပိုပါဘူး........ဒီနေ့အထိတကယ်မချစ်ဘူးဆိုရင်တောင် ....ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့ အလှန်ခံချင်တဲ့ကောင်....ပါ။
2011-08-16 16:46:07 (2 comments,0reshares,3+1s)လူများစုမအောင်မြင်ကြသည်မှာ ကံဆိုးမှု ကြောင့်မဟုတ် .......၀ီရိယဆိုးမှု ၊ ညဏ်ဆိုးမှုကြောင့်သာ ဖြစ်၏......။ိ
2011-08-16 16:41:11 (1 comments,0reshares,6+1s)အနိုင်ခံ လိုက်ရခြင်းသည် ယာယီအခြေအနေတစ်ရပ်ဖြစ်သည်...။ ယင်းကို ထာဝရအခြေအနေတစ်ရပ်ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်လိုက်သည့်အရာမှာ လက်လျှော့အရှုံးပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်...။
2011-08-16 16:38:18 (1 comments,0reshares,4+1s)ပျင်းရိသော ဦးနှောက်သည် မကောင်ဆိုးဝါး၏အလုပ်ရုံ ဖြစ်သည်......
2011-08-16 16:26:02 (2 comments,0reshares,2+1s)Don't say it's too lateThis, too, will passှStart now , never lateNever start, ever late Nothing is impossible forawilling !
2011-08-16 16:18:43 (1 comments,0reshares,0+1s)ငါးအပုပ်ဝယ်ကြဦးမလား.... ဟု မည်သူမျှမအော်ပါ။။။။။
2011-08-16 16:13:51 (3 comments,0reshares,4+1s)လူမိုက်များက ခွင့်လည်းမလွှတ်...မေ့လည်းမမေ့လူနုံလူအများက ခွင့်လည်းလွှတ်သည်...မေ့လည်းမေ့သည်ပညာရှိများက ခွင့်တော့လွှတ်သည် ...ဘယ်တော့မှ မမေ့ ....
2011-08-07 05:40:28 (0 comments,0reshares,4+1s)စကားလုံးတိုင်း အမှန်ပါပဲဒါပေမယ့် ငါ တောင်းပန်ပါတယ်မတူညီတဲ့ အစွန်း နှစ်ဖက် က ငါ တို့ နှစ်ဦးကိုဆွဲငင်နေတာ မင်းနားလည်လာမှာပါမင်းမျက်လုံးနဲ့ယုံကြည်ပေးပါ.....ငါတို့ ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့် နောက်သို့ ပဲ ပြန်လည့် ကြမယ်မနာကျင်စေမယ့် နောက်သို့ ပဲ ပြန်လည့် ကြမယ်အချစ်မ၇ှိ တဲ့ နောက်သို့ ပဲ ပြန်လည့် ကြမယ်ငါတို့ တွေ မောပန်းခဲ့ ပြီ.....နောက် ထပ်ပြီး မခေါ်ပါနဲ့ တော့ နောင်တချိန် ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ...အခုတော့ မင်းရဲ့ လက်မှာ ငါမဟုတ်ပဲငါ့ရဲ့ နှုတ်ခမ်းမှာ မင်းမဟုတ်ပဲငါတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်မက်တွေ မ၇ှိတော့ ပဲကောင်းကင်ကြီးမှ ပေးခဲ့ တဲ့ အရာအားလုံးကောင်းကင်ကြီးသို့ပြန်ပေးလိုက်တော့ မယ်........ more »
2011-08-07 05:38:26 (0 comments, 1 reshares,4+1s)“ မှားယွင်းစွာ ”ရင်ခွင်မှာ ညိုခဲ့တဲ့မိုးကို ရွာပါလို့ မဆိုပါဘူး။အုံဆိုင်းနေပေမယ့် လေအဝှေ့မှာ ရှောင်ဖယ်တတ်တာပဲ။ဆုံတွေ့ခွင့် နောက်ကျတဲ့ ကံကြမ္မာကိုပဲ ယိုးမယ်ဖွဲ့မယ်ဆိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်က မှားခဲ့ပြီးသားပဲလေ။သစ္စာတော့ မပျက်ခဲ့ပါဘူး။ မေတ္တာလည်း မဖျက်ခဲ့ပါဘူး။ယုံကြည်စွာချစ်မိတဲ့နောက်မှာ မပိုင်ဆိုင်ခင် ဖွင့်ဟမိတာ နားလည်မှုတွေ လိုချင်လို့ပါ။တကယ်ဆို လူတိုင်းက ဖုံးကွယ်နေတာပဲ ။လူတိုင်းက လိမ်ညာခဲ့တာပဲကိုဘာလို့ ဖွင့်ဟမိတာလဲကွာ။ယုံကြည်မှုတွေကိုပဲ သက်သေတည်ပြီးချစ်နေရတဲ့ဘ၀မှာ နားလည်မှုတစ်ခုအတွက်နဲ့ဖွင့်ဟခဲ့တာ။ မိုက်မဲမှုတစ်ခုလား။ စွန့်လွှတ်ဖို့ မရဲပါဘူး။ မှန်တာပြောလို့ ရွာပြင်ထုတ်သလို။ကို့ကို အချစ်တွေ ပြန်နှုတ်ယူသွားပီလားကွာ။ရက်စက်လိုက်ပါ ချစ်သူ...........ဟန်ဆောင် လိမ်ညာပါမှ ချစ်မယ်ဆို ကိုယ့်ကို ကိုယ်တောင် စိတ်ကုန်တယ်။ဖြစ်ခဲ့တာကို ဘယ်တော့မှ နောင်တမရသလိုအချ... more »
2011-08-06 14:05:05 (1 comments,0reshares, 8 +1s)စိတ်ညစ်ရင်ရေချိုးပါ(၁) တစ်ခါတုန်းက သားအဖနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။တစ်နေ့တော့သားအဖနှစ်ယောက် ခရီးတစ်ခု ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်။ သူတို့ထွက်မယ့် ခရီးစဉ်မှာ တောအုပ်တစ်ခုကို ဖြတ်သန်းသွား ရမှာပါ။ အဲ့ဒိတောအုပ် ထဲမှာ သူခိုးတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဓားပြသူခိုးတွေရဲ့ လုပ်ထုံးအစဉ်အလာတစ်ခုက သားအဖနှစ်ယောက်လာရင် သားကိုဖမ်းပြီး အဖေလုပ်သူကို အိမ်ငွေပြန်ယူစေပါတယ်။ဆရာတပည့်လာရင်လည်း ဆရာကိုဖမ်းပြီး တပည့်ကို အိမ်ငွေပြန် ယူစေပါတယ်။ဒီလုပ်ထုံး အစဉ်အလာကို သိထားတော့ သားအဖနှစ်ယောက် ခရီးမထွက်ခင် အဖေလုပ်တဲ့သူက ''ငါ့သား ဓားပြ သူခိုးတွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ မင်းနဲ့ငါ သားအဖတော်တယ်လို့ မပြောနဲ့ ဘာမှမတော်ဘူးလို့ ပြော'' လို့မှာပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ တောထဲရောက်တော့ ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ ။ဓားပြသူခိုးတွေနဲ့တွေ့ပါတယ်။ တွေ့တော့သားအဖ နှစ်ယောက်ကို ဖမ်းပြီး'' သင်တို့ ဘာတော်သလဲ'' လို့မေးတော့ သားလုပ်တဲ့သူက '' ဘာမှမတော်ဘူး'' လို့ ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့ သားအဖနှစ်ယောက်တောအုပ်... more »
2011-08-06 13:49:54 (1 comments, 1 reshares,4+1s)အချစ်က မီးအိမ်၊ သူငယ်ချင်းကအရိပ်ဆိုရင် မီးငြိမ်းသွားတဲ့အခါ သင့်ပတ်လည်မှာ အရိပ်တွေပဲကျန်နေတာကို တွေ့ရလိမ့်မယ်။ သူငယ်ချင်းဆိုတာ နောက်ဆုံးအချိန်ထိ သင့်ကို အားအင်တွေပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။
2011-08-05 17:40:23 (2 comments, 1 reshares,2+1s)ရင်ခုန်သံ တွေ သဲ့..သဲ့ ပြီး ယူသွားတဲ့ မင်းကို ........အမြဲသတိရနေတယ်......... ပြန်လာခဲ့ပေါ့.....
2011-08-05 12:13:21 (0 comments,0reshares,4+1s)ချစ်မိသူကို အပြစ်ဆိုဦးမှာလား ...........မချစ်တော့ရင်လေ........... ဒါပေမယ့် ချစ်တဲ့သူမှာလည်း အသည်းရှိပါတယ် ...............ခံစားရပါတယ် ........ ခွင့်လွှတ်ပေးပါ........။
2011-08-05 11:58:50 (1 comments,0reshares,2+1s)ရင်ခုန်ဖက်တစ်ဦးအတွက် ........ပေးဆပ်မှုတွေများလွန်းတာ ............ တန်ပါ့မလားးးးးး
2011-08-04 12:40:19 (4 comments,0reshares,3+1s)လောကမှာ အရေးကြီးဆုံးက ငွေတဲ့။ ဟုတ်တာပေါ့။ ပညာရေးက ဒုတိယ။ ငွေမရှိရင် ဘာမှ လုပ်မရဘူး။ ပညာပါ သင်မရဘူးလေ။ အချစ်ဆိုတာ အသာထား။ ဒါတွေက ဒီအရာတွေ ပြီးမှ စဉ်းစားရမှာ။ဘယ်လောက်ပဲ အပေါ်ယံလို ဆိုဆို လူတွေက ဒီအပေါ်ယံကို မက်မောတာပါ။ အသည်းနှလုံးဆိုတာ အစာအိမ် ၁ခုလောက်မှ အရေးမပါဘဲလေ။ ဘယ်သူ့ ဘယ်သူအတွက်မှ ပေးဆပ်တာ မလုပ်သင့်ဆုံး အလုပ်ပဲ။ ကိုယ့်ဘဝကို ဘယ်သူမှ လာပြီး ကောင်းစားအောင် လုပ်ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆိုးရွားနေချိန်မှာတော့ လက်ညှိုးတွေ ငေါက်ငေါက်ထိုးပြီး ပြောကြမယ့်သူတွေ ပုံလို့ လက်ချိုးရေလို့တောင် ရမယ် မထင်ဘူး။ ကိုယ် ချစ်ပါတယ်ဆိုပြီး ပေးဆပ်လိုက်တဲ့သူက အစပေါ့။ အမဲရိုးနှယ် ဟင်းအိုးမှ အားမနာ တဲ့ ... အဲ့လိုပဲ အနူလက်နဲ့ ရွှေခွက် နှိုက်ချင်တာ တော့ မဟုတ်ဘူး။ အဲ့လို အပေါ်ယံ လူတန်းစားတွေ ရဲ့ ကစားရာ နေရာမှ ဘဝကို ဓါးစာခံပြီး ရင်းလိုက်တာ နောက်ဆုံးတော့ ဘဝနဲ့ နှလုံးသားက စုတ်ပြတ်နေတဲ့ ကစားစရာလောက်တောင် တန်ဖိုး မရှိတော့တာ သိလိုက်ရတယ်။ ငါ ရင်းလိုက်တာက ဘဝ နင် နင်းလိုက်တာက ခဏ .. ဘယ်တော့မှ မရဖူးတဲ့ နေ... more »